बासी पानी पुनुहुछ ? बासी पानी पिउन योग्य हुन्छ कि हुदैन ? – Nepal's Digital Newspaper
बासी पानी पुनुहुछ ? बासी पानी पिउन योग्य हुन्छ कि हुदैन ?
August 11, 2017 nepsnews0Comments
एजेन्सी। तपाईले आफ्नो घरमा राखेको पानी बिहान उठेर खाँँदा यसको स्वादमा परिवर्तन भएको कुरा हामी मध्य सबैलाई थाहा छ। यसो हुनुको मूल कारण भनेको बेलुकाबाट विहानसम्ममा हुने रासायनिक परिवर्तन हो भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ ।
रासायनिक परिवर्तन भन्ने बित्तिकै नआत्तिनुहोस्, किनभने यस प्रकारको रासायनिक परिवर्तन हानिकारक हुँदैन । हालै डिस्कोभरी न्युजमा यस प्रकारको परिवर्तनका साथै किन पानी भएको बोतलमा एक्सपाइरी डेट राखिन्छ भन्ने भिडियो प्रसारण गरिएको थियो ।
डेलीमेलमा प्रकाशित एक सामग्रीका अनुसार पानीमा प्रोटिन वा सुगर हुदैन यसले गर्दा पनि पानीलाई माइक्रोव्स्ले खानालाई टुक्र्याए जसरी टुक्र्याउँदैन । यसले गर्दा अन्य खाना बिग्रिए झैं पानी बिग्रिदैन ।
तर रासायनिक प्रक्रियाले गर्दा पानीको थोरै भाग मात्रै कार्बोनिक एसिडमा परिवर्तन हुन्छ । डिस्कोभरी न्युज कार्बोनिक एसिडले एउटा वा दुईटा प्रोटोन गुमाउने र कार्बोनेट वा बाइकार्बोनेटमा परिणत हुने’ भनेको छ । यसले गर्दा पानीको स्वादमा केही परिवर्तन हुनेगर्छ ।-एजेन्सी
← ट्याक्सी चढी भक्तपुरको मुहानपोखरी लगेर लुट्ने लुटेरा पक्राउ यस्तो छ राम कहानी …..
ठूलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो डोमेस्टिक एयरको हेलिकप्टर,…… →
१८ औं पटकसम्म बच्चा जन्माउदा पनि परिवारमा खुशी आउन सकेन
July 18, 2017 nepsnews Comments Off on १८ औं पटकसम्म बच्चा जन्माउदा पनि परिवारमा खुशी आउन सकेन
कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ? यस्तो छ वास्तविकता
July 18, 2017 nepsnews Comments Off on कस्ता खालका युवतीहरु छिट्टै यौन सम्बन्ध राख्न तयार हुन्छन् ? यस्तो छ वास्तविकता
गोविन्द केसीज्यू, किड्नी चोरी हुँदा कता हुनुहुन्थ्यो, अहिले के–को अनशन हो ?
July 20, 2017 nepsnews Comments Off on गोविन्द केसीज्यू, किड्नी चोरी हुँदा कता हुनुहुन्थ्यो, अहिले के–को अनशन हो ?